TCN-FSC-5G (10SP) Mashiinka cuntada yar ee qaboojiyaha Mashiinka iibinta yogurt qaboojiyaha Mashiinka iibinta smoothie - Shiinaha TCN-FSC-5G (10SP) Mashiinka cuntada yar ee qaboojiyaha Mashiinka iibinta yogurt qaboojiyaha Mashiinka iibinta smoothie iibiyaha, Warshad â € “ Mashiinka TCN Vending
Bogga ugu weyn » Product » Mashiinka Iibinta Cuntada Qaboojiyay
Iyada oo leh muuqaal 10-inji ah oo LCD ah, fiidiyowyo iyo sawirro qaabab kala duwan ah ayaa la ciyaari karaa.
Pt La qabsado qaabeynta heerka caalamiga ah ee MDB, waafajiyaa heerka caalamiga ah ee DEX, waxayna taageeri kartaa heerarka kala duwan ee heerka caalamiga ah.
Taageero WeChat, alipay, bixin bixin garabka, lacag bixinta jingdong, waxay heli kartaa qoraalo, COINS, shaqo is bedel qadaadiic.
Technology Teknolojiyada la sharciyaysan waxay awood u siisaa albaabada unugyada inay isku xirnaadaan.
Door Albaabka galaaska wuxuu ku dhejinayaa seddex lakab oo ah galaas madhan oo mugdi ah, kaasoo ka hortegi kara shaqada ceeryaanta oo dammaanad qaadi kara qaboojiyaha.
Ma jiro qaboojiyaha ilaalinta bii'ada. Qaybta qaboojinta ee madaxa bannaan, hagaajinta ciladdu waa mid ku habboon.
Protection Ilaalinta daadashada
● Ku wareegsan qaboojiyaha adag iyo xawaaraha isku midka ah ee qaboojinta, lakabka qafiifinta qaro weyn, u keydinta xawli deg degga ah, keydinta tamarta iyo dhaqaala badan.
Mashiinka Iibinta Qaboojiyay
30 nooc (marka loo eego cabirka alaabada)
Qiyaastii 90-180pcs (iyadoo loo eegayo cabirka alaabta)
-18 ° C-25 ° C (hagaajin)
TCN-D900-9C (55SP) 24 iscaawinta cuntada iyo mashiinka lagu iibiyo qolka jimicsiga
Mashiinka iibinta qalinka ee dugsiga TCN ee iibka ah
TCN 24 Saacado Is-adeegsiga Mashiinka Lacag-bixinta ee CBD ee leh xaqiijinta da'da